TUV sud yakabatana Cert
TUV kumaodzanyemba kuChina, nekukurumidza kuvaka mhando yechiratidzo. Yakagadzika murabhoritari kumaodzanyemba kweChina. Kubva 2004, yakasimbisa in-yakadzika uye yakabatana kubatana neanbotek kuongorora. Anbotek zvishoma nezvishoma yakava ine chiremera, inokurumidza uye yehunyanzvi chiteshi chevatengi kunyorera TUV certification yeUPS, magetsi adapter nemarambi. Kuedzwa kweAnbotek kwave kuri mudiwa weTUV yekumaodzanyemba boka kwemakore mazhinji, iro bhizinesi vhoriyamu ndiyo yekutanga muindastiri, uye rave riri rakanakira murabhoritari yekudyidzana kumaodzanyemba kweChina mu2009, 2010, 2011 uye 2012. Kuedzwa kweAnbotek kwabudirira uye nekukurumidza yakanyorera TUV yekumaodzanyemba chitupa chemabhizinesi angangoita mazana mashanu, ayo ave achizivikanwa zvakanyanya nevatengi.
Anbotek kuyedzwa kunokubatsira iwe nyore kuwana TUV chitupa zvikonzero zvitanhatu
Chikonzero chimwe chekushandisa kwepakeji mukana - seti yemumwe muyedzo chapupu bvunzo, imwe-nguva yekupfuura, kupfupisa chitupa kutenderera, kuitira kuti iwe ugone kuisa pfungwa dzako mukusununguka kuti uwane nekukurumidza zvitupa zvakasiyana zvakapihwa neTUV, kuti zvigadzirwa zvako zvikurumidze kutengeswa kutenderedza nyika;
Reason 2: certification kutenderera uye mutengo zvine musimboti wemakwikwi --TUV inopa anbotek neboka rayo reinjiniya uye vhiza officer, uye inopa pamberi pekubata ese marudzi emakesi uye zvitupa zvinodiwa, kuitira kuve nechokwadi chekuti mutengo wekuongorora uye chitupa kutenderera kuve pachena zvakanakira kupfuura vezera rako.
Anbotek ine mupfumi panguva imwechete iyo batch inogadzirisa chirongwa cheiyo pombi yerudzi, kesi yevimbiso nguva, mutengo unokwikwidza chikonzero chetatu-yekumira sevhisi mabhenefiti - iyo anbotek yekuona co inopa yakazara zvigadzirwa zvigadzirwa zviyero zvemazano zvikamu zvekusarudza mirairo yezvishandiso zvinyorwa zvekushandura chigadzirwa yekuvandudza countermeasure fekitori odhita kutungamira, senge imwechete-yekumira masevhisi;
Chikonzero chechina: yakasarudzika TUV yeboka VIP sevhisi - yakahwina rukudzo rweakanakisisa mudiwa weTUV kwemakore mana akateedzana, kunakirwa kurapwa kwepamusoro kweFirst Level, kuona kuti chikumbiro chedu chega chega chirongwa chinogona kukosheswa uye kurapwa kweVIP;
Chikonzero 5: tarisa pane iyo TUV certification munda kwemakore gumi - anopfuura zana akabudirira kesi gore rega, ane hunyanzvi mukugona kweTUV kunyorera maitiro ekukurumidza kugadzirisa matambudziko uye kubatana kweTUV kwechikwata chakanyanyisa, kuitira kuti ako anonetesa maitiro maitiro iva nyore uye anokwanisa kugadziriswa;
Chikonzero 6: hukama hwepedyo pakati pechitupa chinoburitsa agency - anbotek bvunzo masheya uye manejimendi manejimendi ekuGerman TUV kuchinjanisa kushanya uye kutaurirana kazhinji gore rega rega, kuitira kuti tikwanise kugona kwepakati chitupa zviwanikwa uye kuita kuti kushanda kweTUV kuve nyore uye zvinoenderana nezvinodiwa mumusika
TUV uye anbotek kubatana kukudzwa
TUV mudiwa wakanyanya kuSouth Africa muna 2009, 2010, 2011 uye 2012